Vhiki Ino: Indianapolis Kutanga Kwevhiki | Martech Zone
Iri Svondo: Indianapolis Kutanga Kwevhiki
Chipiri, Zvita 2, 2008 Chipiri, Gunyana 4, 2011 Douglas Karr
Kutanga Svondo ndeye chiitiko chakakomba cheawa makumi mashanu neshanu chinobatanidza vane hunyanzvi uye vanokurudzira vashanduri vewebhu, mamaneja emabhizinesi, graphic maartist, vekutengesa gurus, uye vanofarira kutanga kuitira kuti vagadzire makambani kubva pane pfungwa kuti vatange!
Indianapolis ichagamuchira yayo Yekutanga Yevhiki Yekupedzisira Chiitiko muna Zvita 5? 7th paPurdue Chikoro cheUinjiniya neTekinoroji kuIUPUI kambasi yedhorobha.
Chiitiko chinotanga na5 masikati neChishanu Zvita 5th nemakwikwi erevheta pani. Vatori vechikamu vanobva vavhotera pamakambani avanoda kuumba uye kuunganidzwa muzvikwata zvichibva pane zvido zvekuda uye hunyanzvi Matimu anoshanda pamakambani avo muvhiki rese vachipedzisa nekuratidzira kwechigadzirwa musi weSvondo manheru Zvita 7. Vashandi vanogamuchirwa kuti vapinde mharidzo yekupedzisira.
Pamusoro pevatori vechikamu, Kutanga Kwevhiki kunoitwa kugoneka kuburikidza nerupo rwevatsigiri munharaunda yemunharaunda. Iwo manejimendi manejimendi arikutsvaga vatsigiri kuti vabatsire kudzikisa mutengo wekutora chiitiko. Kana iwe uchida kuve unotsigira kana uchida rumwe ruzivo nezvechiitiko ndapota shanyira webhusaiti iri http://indianapolis.startupweekend.com/.
Startup Weekend inzvimbo yakanaka kwete kungobatana nevamwe vezvemabhizimusi asi kudzidzira hunyanzvi hwako uye zvaunofarira mune zvebhizinesi chairo. Indianapolis vhiki yevhiki ichaita Indiana nyika yekutanga kubata mavhiki matatu? akadaro Lorraine Ball, Mutungamiri weVanonaya mvura uye Muvambi weRoundpeg Kushambadzira
Startup Weekend, LLC yakavakirwa kunze kweBoulder, Colorado uye inofambisa zviitiko zvevhiki kubva kuguta neguta sekuvhoterwa pawebhusaiti yaro, http://startupweekend.com/.
Yapfuura Indiana Startup Weekend zviitiko zvaiitirwa muBloomington, IN uye West Lafayette, IN. Mazhinji emakambani akaumbwa mukati mekupera kwesvondo anga ari ewebhu-based uye mazhinji akaenderera kuve mabhizinesi anoshanda.
Tags: Guy KawasakimazanoSocial Media Marketingkutevera vanyori
Kubudirira kuburikidza neMashandisi Ekushandisa Ekushandisa